Pitch Perfect 4: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato! - Madadaalo
Pitch Perfect 4: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato!
Goorma ayuu Pitch Perfect 4 soo baxaya?
Jilayaasha Pitch Perfect 4: Yaa u soo noqon doona Pitch Perfect 4?
Maxaan ka filan karnaa Pitch Perfect 4?
In kasta oo jilayaasha soo noqnoqonaya tilmaamo, ma jiro ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan filimka afaraad ee Barden Bellas. Dhammaan lacagaha ka soo baxa kooxda Pitch Perfect ee daboolka Beyoncé's Love On Top waxaa lagu deeqi doonaa UNICEF, laakiin ma jirin wax war ah oo ku saabsan in qaybta afaraad ee taxanaha la sii deyn doono iyo in kale.
Ma ahan wax laga naxo in Bellas sidaan ognahay aysan sii jiri doonin natiijada Pitch Perfect 3 dib u eegista taban iyo hoos u dhac 100 milyan oo doolar ah oo ku yimid dakhliga xafiiska marka loo eego kuwii ka horeeyay.
Ilaa inta Universal uusan si kale u sheegin, Pitch Perfect 4 wali waa suurtagal. Haddii qof kastaa awood u leeyahay inuu sameeyo, waa jilayaasha, halkan waa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato sawirka afraad ee mala awaalka ah.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in sawirka afraad uusan lahayn taariikh go'an oo la sii daayo hadda, way adagtahay in la saadaaliyo goorta aan filan karno in la sii daayo. Ka dib markii ay dhajisay sawir iyada iyo saaxiibadeeda Pitch Perfect Brittany Snow, Anna Camp, iyo Chrissie Fit dhamaantood waxay afar farood ku dhejiyeen xisaabaadka warbaahinta bulshada bishii Oktoobar 2018, Rebel Wilson waxay dareen badan ka heshay taageerayaasha Pitch Perfect.
Tan iyo markii sawirka la qaaday bishii Noofambar 2018, inkastoo Wilson uu muujinayo in ay samayn doonto muuqaal kale oo muusig ah bilaha 12 ee soo socda, wax run ahaantii iskama beddelin adduunka muusikada. Sidaa darteed, hadda suurtagal maaha in la go'aamiyo marka sawirka afraad la sii deyn doono natiijada. Kahor intaadan taas samayn, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la xaqiijiyo macluumaadka.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la sheegay in filimka afaraad uu soo bandhigi doono koox cusub oo Bellas ah, haddana waxaa sii adkaaneysa in la qiyaaso in aysan ku jiri doonin wax-qabadyadii markii horeba hormuudka ka ahaa in ganacsigu guulaysto.
Marka lagu daro Anna Kendrick sida Beca, Rebel Wilson sida Fat Amy, Brittany Snow sida Chloe, Anna Camp sida Aubrey, Hailee Steinfeld sida Emily (oo ku biiray Bellas ee taxanaha koowaad), Hana Mae Lee sida Lilly (sidoo kale loo yaqaan Esther. Kaas oo aan ka helnay filimkii saddexaad), iyo Ester Dean oo ah Cynthia, oo aan magacyo dhowr ah u bixinno.
Waxaa jirta suurtogalnimo xoogan in filimka afaraad la sameeyo sababtoo ah xubnaha kooxda waxay rabaan inay dib ugu soo laabtaan wareega kale ee cappella. Isla markii ay soo baxday qaybta saddexaad ee Pitch Perfect, Wilson wuxuu muujiyay inuu xiiseynayo inuu sameeyo afar ama shan filim oo kale, halka Kendrick uu sheegay in jilayaashu ay sii wadi doonaan inay wada shaqeeyaan weligood. Wilson iyo Kendrick labaduba waxay muujiyeen xiisaha ay u qabaan inay sameeyaan afar ama shan filim oo kale.
Atariishada, oo hadda xayaysiinaysa barnaamijkeeda cusub ee xaqiiqada talefishinka ee Perfect Harmony, ayaa ET Online u sheegtay inay hoos u dhigi doonto filimkii afaraad ee Pitch Perfect haddii la sameeyo. Hadalkeeda waa la raacay, gabdhahaas waan ka helay, ayay raacisay, aniguna waan jeclahay in aan doorteyda ciyaaro, markaa haddii ay ii baahdaan, waxaan halkaas joogi lahaa aniga oo aan fekerin.
Soo noqoshada Elizabeth Banks iyo John Michael Higgins, kuwaas oo ciyaaray falanqeeyayaasha caanka ah ee Gail iyo John saddexda filim ee ugu horreeya, ayaa sidoo kale la rajeynayaa inay qayb ka noqdaan filim kasta oo afraad ah.
Pitch Perfect 3 waxaa ka maqnaa dhowr jilayaal oo muhiim ah, oo ay ku jiraan Skylar Astin iyo Ben Platt, taasoo kor u qaadeysa su'aasha ah in filimka afaraad uu soo celin doono wiilasha. Trish Sie, agaasimaha, ayaa sheegtay in joojinta ay sabab u tahay jadwalka isku dhacyada, laakiin ma aysan meesha ka saarin suurtagalnimada soo noqoshada mustaqbalka.
Kaca Xiliga 2: Faahfaahinta Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Hadda!
Dare Me Season 2: Cusbooneysii Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Maanta!
Da'yarta Sheldon Xilliga 6: Faahfaahinta Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Hadda!
Filimka seddexaad, Bellas waxay dib ugu midoobeen USO (United Service Organizations) dalxiis dibadda ah, seddex sano ka dib filimka labaad. Tartanka waxaa loo soo agaasimay furitaanka DJ Khaled, ku guuleystaha waxaa la siiyay fursad uu ugu furo isaga.
Beca ayaa la siiyay fursad ay ku furto DJ Khaled, oo leh barakada Bellas, ka dib burush nasiib darro ah oo ay la socdaan qaar ka mid ah qalloocyada, ka hor inta aan burcadda oo dhami isu keenin waxqabad kama dambays ah. Fanaaniinta iyo atariishooyinka, Bellas waa koox dumar ah oo dhalinyaro ah.
Inkasta oo uu ahaa filimkii ugu dambeeyay oo qof kastaa uu ka warqabay taas, qof kastaa wuxuu ku guuleystey dhamaad farxad leh, sida Beca oo shaqo ka heshay DJ Khaled, Aubrey oo dib ula midoobay aabihiis oo laga aqbalay dugsiga vet, Emily waxay ku laabatay Jaamacadda Barden, iyo Lilly waxay jacayl ka helaysaa DJ Dragon Nutz.
Marka, haddii Pitch Perfect 4 ay noqon lahayd mid guulaysata, waxay u baahan doontaa in la helo hab lagu soo celiyo Bellas in ka badan tartan kale.
Fikrad kale oo loogu talagalay filimada mustaqbalka waxay ka timid Anna Camp. Markii la weydiiyay haddii ay jeclaan lahaayeen inay la qabsadaan Bellas shan ama tobankii sanoba mar, atariishada ayaa u sheegtay Collider, Waxaan rabnaa inaan sii wadno sameynta ilaa aan ka weyneyno oo aan ku shaqeyneyno guryaha hawlgabka.
Fat Amy waligeed hooyo ma noqotay? Ma jiraan qoys Fat Amy iyo Bumper leeyihiin? Waxay noqon lahayd wax aad u xiiso badan inaad dib ugu noqoto wakhtiga oo aad aragto waxa ku dhacaya jilayaasha aad baratay oo aad jeceshahay, ayuu yidhi.
Sixiroolaha Qaybta 2 ayaa dib loo cusboonaysiiyay ama laga joojiyay Netflix?
Nolol maalmeedka Xilliga Boqorka Waaraya 2 dhab ma ka baxaysaa 2021?
minecraft lacag la’aan iyadoon la soo degsan
Taleefanka fudud wuxuu hagaajiyaa sync itunes
sida loo helo robux lacag la’aan mobilada roblox
kala soo bixi filimada buuxa ee bilaashka ah adiga oo aan xubin ka ahayn
ciyaaraha aan la furin 66 dhibka taangiga
email netflix iyo furaha sirta ah oo lacag la'aan ah